Breaking News! Waltajjiin cufaa PP president Naannoolee hunda hirmaachise Finfinneetti guyyaa lamaaf gaggeeffamaa ture Cuunfaa Isaa kunooti; – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBreaking News! Waltajjiin cufaa PP president Naannoolee hunda hirmaachise Finfinneetti guyyaa lamaaf gaggeeffamaa ture Cuunfaa Isaa kunooti;
1, Dhiibbaan United States of America
, United Nations, European Union
irraa kan dur caalaa itti jaabaachuu Abiyyi afaan isaan dubbachaa ture.
2, Filannoo gaggeessuuf qaamoota Filannoo gufachiisuu danda’an Shanee fi TPLF irratti qindoominaan hojjachuun nuuf hafa jachuun Abiyyi haasaa isaa keessatti addeeseera.
3, hidhamtoota siyaasaa warra hiikamaniis dhiibbaa uumuu hin dandeenye hiikuuf haroora keessa galchanii jiru. Ummatni akka warri hafe ni hiikaman jadhee Filannoo irratti fincila nutti hin dhoofneef nu gargaara afaan isaan Abiyyi haasaa ture.
4, Diinagdeen biyyatti qilee seenaa waan jirtuuf qaalayinsi guutuu biyyattii keessatti mudatee jiru gara fincilatti ummata akka hin geessine president Naannoolee irra daddeebiin kaasaa turan.
5, Basaastoota baay’ee Iddoo Shaneen keessa sochootu keessatti erginee jirra jachuun gaafota waa’ee Lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa irratti ka’a irratti dubbatee jira Abiyyi.
6, Waltajjichi keessatti paartii Bilxiginnaan mormiti hunda akka dinaatti akka ilaalamu, akka gufuu Itoophiyaa taateetti ibsame.
7, Abiyyi dhuma irratti President Naannoolee waan doorsisu barbaade fakkaata Bilxiginnaan yoo aangoo irraa buute ani qofaa miti kan badu isiniis anuma waliin dhabamuu dandeessu waan ta’eef jabaattanii hojjachuu qabda jadheenii jira…
Odeeffannoon kun waltajjii cufaa irraa nu dhaqqabe Waliif qoodaa
Namoonni hedduun “koloneel Gammachuu Ayyaanaa bilisa” jedhamaniiru gaafa jedhan argeen, anamoo namatu sararra hin jirree laata jedhee of gaafadhe.
Mee gaafilee tana lamaan naaf deebisaati anamoo namootatu dogoggore laata?
1.Namoota armaan gaditti muldhatan keessaa Eenyutu harree hatee qabame?
1.1 Ilaalchuma siyaasa qofa,sabboonummaaf qofa hidhamnii hin jiranii ?
2. Namoota armaan gadii keessaa Yaasoo Kabbabaa Hordofaa dabalatee hooggantoonni Olaanon ABO erga manni murtii bilisa jedhee ykn mirga wabii eegefii mallaqni wabii kafalamee waggaa tokkoo ol kaadiree PPtiin hidhamanii hin jiranii ?
2.1 kanaaf manni murtii murtoo fedhe yoo kenne ni lakkifamu jettanii yaaddu?
Anaaf jarri kun kaleessas bilisa ammas kan hidhamaniif siyaasa PP waan mormaniif qofadha.
Nama bilisaan bilisa jeshame jechuunuu yakkadha.